Mpaghara ahia na-eme ka ahia Ecommerce na-anọghị n'ịntanetị | Martech Zone
Tuzdee, Machị 5, 2019 Thursday, May 7, 2020 Douglas Karr
Ka m na-enyocha Facebook n'ụtụtụ a, akụkọ dị ezigbo jụụ si na ngalaba ndị uwe ojii mpaghara m pụta. Ha weputara otu ogbe ogbe ndida na nso ulo oru ndi ime obodo anyi e-azụmahịa trading mpaghara. E nwere ebe a na-adọba ụgbọala na bọtịnụ oku akpaaka na ihe mberede.
Chọrọ ebe iji gbanweta ego?
Obodo Greenwood ahọpụtala ebe abụọ na-adọba ụgbọala n'akụkụ ọwụwa anyanwụ GFD Station 91 na 155 E Main St. A na-enyocha oghere ndị ahụ maka nchekwa gị. Igbe oku di n'ime ulo ogwu oku iji kpoo 911 ma obu ihe mberede. pic.twitter.com/KNRig5aru1
- Ndị uwe ojii Greenwood (@gpd_police) March 4, 2019
Ọ naghị adịkarị mgbe m na-ede maka akụkọ dịka nke a, mana ọ bụ n'ezie ihe mbụ m nụrụ banyere ya. Otu enyi nke uche na Twitter gwara m na ha n'ezie na mba niile. Site na ntakịrị nyocha, achọpụtara m na ha nọ n'Atlanta, Chicago, na ọtụtụ obodo ndị ọzọ.
Ọbụna Evan keere njikọ na ndekọ ndekọ aha ịntanetị:
Ulo ahia di iche iche
Site n’ịchọta mpaghara dịdebere ndị uwe ojii, ndị na-ere ngwongwo na-ezighi ezi ma ọ bụ zuru ezu na ntanetị anaghị enwe ike ikwenye ịbịa ebe ahụ. Na ndị omekome na-atụ anya izu gị ihe ma ọ bụ wakpo gị agaghị egosi, ma!
Nye Nchekwa Nnara
Site na ọtụtụ ụlọ ọrụ ecommerce na-arụ ọrụ nke ụlọ, nke a dị ka nnukwu ohere maka ụlọ ọrụ mpaghara. Ọ bụrụ na ị na-ere mpaghara, ị nwere ike ịdepụta azụmahịa dị mma ma ọ bụ mpaghara e-commerce dị na weebụsaịtị ma nye ndị bulie ebe ndị ahụ kama ụlọ gị.
Obi dị m ezigbo ụtọ ịhụ ka e nyere nke a n'obodo nta m. Ekele Greenwood! Na ekele maka ikike iji foto.
Tags: craigslist igbu ọchụe-azụmahịa mgbanwe mpagharaecommerceakwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụndị uwe ojii greenwoodahia n'ịntanetịnchekwa trading zones